ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက် Bonaire ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးက Bonaire ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဥပဒေရေးရာ entity နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများပေးပါသည်။ သာ. ကွီးမွတျပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတရားဝင် entity အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအနာဂတ်တည်ထောင်သူ၏အကြွေးများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့်လက်လှမ်းမမီထဲကနောက်ထပ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာလှူဒါန်းခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပိုင်ဆိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးအပ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တည်ထောင်သူအဘယ်သူမျှမအမည်ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်အတူတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်တီးရန်ထို option ရှိသည်။
ဒတျချြအမည် "Stichting Particulier ဆုမွန်ကောင်း" ဖြစ်ပါတယ် "ဟု SPF" အတိုကောက်။ ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်သည်အတိုင်း, SPF non-profit, လူမှုရေး, သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းခံရဖို့မရှိပါ။
1636 မှစ. 1800 ရန်, Bonaire တစ်ဒတ်ခ်ျကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံက 1800 မှ 1803 ထံမှ Bonaire သိမ်းပိုက်ပြီးထပ်မံ 1807 ထံမှ 1816 ကနယ်သာလန်နိုင်ငံမှပြန်လာသောအခါနှင့်နယ်သာလန်အန်တီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2010 ခုနှစ်, Bonaire အဆိုပါနယ်သာလန်အန်တီဖျက်သိမ်းသည့်အခါဒတျချြထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိဖို့မဲပေးကြသည်။ ဒါဟာနယ်သာလန်၏နိုငျငံတျော၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
တစ်ဦးက Bonaire ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကအကျိုးခံစားခွင့်များကဤအမျိုးအစားများနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့ပေး:
•အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်မရှိ, အခွန်ပေးဆောင်။ သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်း IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။ တခြားလူတိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
Bonaire ၌တူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူနာမည်များနှင့်အတူအခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူရောထွေးခံရဖို့မဒါ SPF ထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရပါမည်။
ပညတ္တိကျမ်း၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာစကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အတော်များများကပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုတည်ထောင်သူပြီးနောက်အမည်ရှိနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သူကမလိုအပ်ပါ။
ဘုံအမြစ်လည်းဆင်တူ, ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ် Bonaire အတွက်အရပ်ဘက်ဥပဒသက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့လုပ်ရပ်နှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်အခြေခံအုတ်မြစ်မှတည်ထောင်သူထံမှအမည်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်း။
Bonaire အခြားနိုင်ငံများက "အသင်းဆောင်းပါးများ" (ပဋိညာဉ်စာတမ်း, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ, ကငျြ့) အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့စာဖြင့်ရေးသားတူရိယာခေါ်ခြင်းအရာကိုရည်ညွှန်းသည်။ အသင်းကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများနှင့်ဆင်တူသည် SPF ရဲ့ဆောင်းပါးများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံကိုတက် setting များအတွက်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားကိုပေး။
ယင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏နောက်ထပ်ဥပမာရပ်စဲအပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏, ထိုဆောင်းပါးများပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထက်အခြားသူတစ်ဦးဦးမှဖြန့်ဝေခြင်းကိုခံရသည်ဟုပေးနိုငျသညျ။ သို့မဟုတ်ယင်းဆောင်းပါးအတွက် SPF ပိုင်ဆိုင်မှုမှခေါင်းစဉ်ကိုယူမဟုတ်ဘဲတစ်ခုသာအုပ်ထိန်းသူသို့မဟုတ်တတိယပါတီများကိုယ်စားအပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဂေါပကအဖြစ်ပြုမူမည်မဟုတ်ကြောင်းသတ်မှတ်ရမည်။ ဒါကြောင့် SPF ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲသာစီးပွားရေးလွှဲပြောင်းများအတွက်မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လာပေမည်။
အဆိုပါ SPF ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစီးပွားရေးသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချနိုင်ပါသည်။
မြို့ပြ Code ကို၏စာအုပ်2အမြစ်လည်းမိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အားပေးနေကြသည်နှင့်တက်ကြွစွာဒါပြုအံ့သောငှါပေးစွမ်းသည်။ အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်မယ့်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်. တည်ရှိ။ အဆိုပါ SPF ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို (Equity, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ, etc) စီမံခန့်ခွဲမယ့်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်ယေဘုယျမိတ်ဖက်တစ်ဦးမိတ်ဖက်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, ဒါမှမဟုတ်အရာအောက်မှာတစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် မြို့ပြ Code ကို "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပို့ချ" အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်မဟုတ်။
SPF ရဲ့အချိန်တိကျတဲ့ကာလအဘို့, အစဉ်အမြဲ (န့်အသတ်သက်တမ်း) အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လျှင်။ အဆိုပါဆောင်းပါးများပျော်ဖို့အခွင့်အာဏာကိုတည်ထောင်သူသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူတည်ရှိအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားထိုကဲ့သို့သောသတ်မှတ်မဟုတ်လျှင်မန်နေးဂျင်းဘုတ်အဖွဲ့ resolution ကိုအားဖြင့်ပျော်မယ့် SPF ။
ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလူတစ်ဦးက "တည်ထောင်သူ" အဖြစ်လူသိများသည်။ တည်ထောင်သူကိုမဆိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံသားများဖြစ်နိုင်သည်နှင့် Bonaire ပြင်ပဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းကဆှေးနှေးခဲ့သကဲ့သို့, SPF ကို "ရည်ရွယ်ချက်" အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တိုက်မြစ်ကိုလွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကနေအကျိုးရှိမည်သူကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအမည်ပေးနိုင်သည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, တည်ထောင်သူကဲ့သို့မည်သည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားများဖြစ်နိုင်သည်နှင့် "Non-နေထိုင်သူ" အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအဖြစ် Bonaire ပြင်ပဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်ကြသည်။
သူတို့ခေါင်းစဉ်ကိုင်ကြဘူးပေမယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ဝင်ငွေကနေအကျိုးအမြတ်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်ကိုအတွက် SPF ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပတ်သတ်ပြီးများတွင်ဥပဒေဖြင့်အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ "စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ" စဉ်းစားနေကြသည်။
ကရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်လူတစ်ရှိသည်ပါဘူးကြောင့် SPF တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့်မတူ; ခွဲတမ်းသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာသို့ပိုင်းခြားလေ၏။ ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုမှအကြောင်းမဲ့မပေးပါ။ အဆိုပါဆောင်းပါးကနဦးမန်နေးဂျင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုခနျ့အပျ။ နေရာလွတ်ဟာဆောင်းပါးများမဟုတ်ရင်သတ်မှတ်မဟုတ်လျှင်ကျန်ရှိနေသေးသောဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြည့်ရကြ၏သေခြင်း incapacity, ဒါမှမဟုတ်အငြိမ်းစားယူသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
2011 ကတည်းကကော်ပိုရိတ်အခွန်ကို "အထွက်နှုန်း" အခွန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဘယျသို့နှင့်အတူဖျက်သိမ်းနှင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအမြတ်အစွန်းရရှိသူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါမျှမအခွန်အခများချမှတ်ထားပါသည်။ အမြတ်အစွန်းတစ် 5% နှုန်းမှာအထွက်နှုန်းအခွန်ချမှတ်ခံရလိမ့်မည်သည့်ရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များမှဖြန့်ဝေနေကြသည်သာအခါ။
Bonaire နယ်သာလန်အစိုးရကမြို့တော်စည်ပင်ကအဖြစ်ကုသကတည်းကတရားဝင် entity တစ်ခု Bonaire နေထိုင်သူ entity အဖြစ်ငျြးပွညျ့မီမဟုတ်လျှင်, 25% ၏ပုံမှန်ဒတျချြကော်ပိုရိတ်အခွန်အားလုံးအမြတ်အစွန်းသက်ဆိုင်သည်။
Bonaire ဖွဲ့စည်း Foundations နှင့်ယုံကြည်မှုအလိုအလြောကျ Bonaire နေထိုင်သူအဖြစ်ကုသနှင့်မည်သည့်အခွန်အခများမှဘာသာရပ်မဟုတ်နေကြသည်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနေဆဲ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာတွင်ဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဝင်ငွေအပေါ်အခွန်မှဘာသာရပ်တခြားလူတိုင်းကသူတို့အခွန်အေဂျင်စီများမှသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးသတင်းပို့ရမည်။
အဆိုပါ SPF အစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်မထားဘူး။ ထို့ကြောင့်, Bonaire အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များနှငျ့ပတျသကျသောအဘယ်သူမျှမအများပြည်သူမှတ်တမ်းများရှိပါတယ်။
အဖြစ်လျင်မြန်စွာအစည်းအရုံး၏အကျင့်များနှင့်ဆောင်းပါးများအဖြစ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ပေါင်း notarized နိုင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရေးအချိန်ဆုံးဖြတ်သည်။ အတော်များများကဖွဲ့စည်းရေးကုမ္ပဏီများသည်တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရက်၌ဤပွီးမွောကျနိုငျသညျ။
တက်ကြွစွာအမြတ်အစွန်း, အခွန်အခမဲ့, privacy ကို, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း, တည်ထောင်သူထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုပြည့်စုံနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, နှင့်အင်္ဂလိပ်ရေပန်းစားသည်: တစ်ဦးက Bonaire ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကနိုင်ငံခြားသားတွေကဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။